It is me. Ko Niknayman.: သေပြီတော်။
နအဖရဲ့ဝါဒဖြန့် ချီရေး သတင်းစာ (သတင်းညာ)တွေ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာကို မကြာခဏ ဆိုသလို တွေ့ နေရပါရဲ့ ဗျာ။
ပထမဦးဆုံးကတော့ သတင်းစာပါ နအဖဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ နောက်မှာ “ကမ္ဘာ ကျော် လူလိမ်ကြီးများ”ဆိုပြီး ရေစာနဲ့ ပါလာတာတွေ့ ကြလို့မြန်မာပြည်သူ များ အင်မတန် မှန်ကန်သော ရေးသားမှု ဖြစ်ကြောင်း အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ရလောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံခဲ့ကြလေရဲ့ ။
ဒုတိယ တစ်ကြိမ်ကတော့ အင်္ဂလိပ် လိုထုတ်တဲ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ထဲမှာ “killer Than Shwe” နဲ့“Freedom” စ ကားလုံးကို ခရီးသွားကြော်ငြာပုံစံနဲ့ ထည့်သွင်းခဲ့လို့ ပါ။
မကြာခင်ရက်ကလည်း ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ “Support The Monks, Free Burma” ဆိုတဲ့ စာရွက်ကပ်ထားတာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံကို အီရတ်စစ်ဆန့် ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲဆိုပြီး နအဖ သတင်း စာထဲမှာပါလာတာလည်း တကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေပါ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့ မြင်ကြရလေရဲ့ ။
အခုလည်း ကြည့်ပါဦး။ ဒီတစ်ခါကတော့ ဗေဒင်လက္ခဏာအဟောအပြောတွေ သိပ်ယုံတတ်တဲ့ နအဖတို့အတွက် ရှေ့ ပြေးနမိတ်ဘဲ။ မြန်မာပြည်သူများသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပြည်သူတွေပါ အမုန်းပွားတာခံနေရတဲ့ နအဖဗိုလ်ချုပ်များ မကြာခင်မှာ ဇီဝိန်ချုပ်တော့မယ့် အလားအလားပြနေတာ။ ရဟန်းတော်တွေကို ပြစ်မှားခဲ့တဲ့ ကံကြီးထိုက်တော့မယ့် အခြေအနေလို့ လည်းပြောရနိုင်တယ်။ ရဟန်းတော်တွေကို စော်ကားခဲ့လို့မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေသွားခဲ့တဲ့ ကြွံ့ဖွတ်အတွင်းရေးမှူး အဖြစ်အပျက်လည်း သက်သေပြခဲ့လေရဲ့ ။ အမျိုးသား ညီလာခံကြီးကျင်းပနေတဲ့အဆောက်အဦးရဲ့မီးဖိုချောင်လည်း မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရတာလည်း မှတ်မိကြမှာပေါ့။
ဒီနမိတ်ကြီးကတော့ “သေပြီတော်”တဲ့ ။ နအဖရဲ့ဝါဒဖြန့် ချီရေး အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့www.myanmar.com မှာ (၁၈) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ (အင်္ဂလိပ်စာ) မှာပါတဲ့ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး ကော်မီတီဖွဲ့ စည်းကြောင်း ကြေညာချက်ကို ရေးတင်ထားတာ “နေပြည်တော်” အစား “သေပြည်တော်” လို့ရေးထားတာပါ။ ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ ။ နအဖတွေရဲ့ဘ၀ရှေ့ ရေးကတော့ လားလားမှမ ကောင်းဆိုလိုတာပါ။